1 Ndị Kọrịnt 9 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
9 Ọ̀ bụ na mụ enwereghị onwe m?+ Ọ̀ bụ na mụ abụghị onyeozi?+ Ọ̀ bụ na mụ ahụghị Jizọs Onyenwe anyị?+ Ọ̀ bụ na unu abụghị ọrụ m n’ime Onyenwe anyị? 2 Ọ bụrụ na mụ abụghị onyeozi n’ebe ndị ọzọ nọ, n’ezie, abụ m onyeozi n’ebe unu nọ, n’ihi na unu bụ akara+ nke na-egosi na abụ m onyeozi n’ime Onyenwe anyị. 3 Ihe m na-agwa ndị na-enyocha m iji zara ọnụ m bụ:+ 4 Ọ̀ bụ na anyị enweghị ikike iri ihe+ na ịṅụ ihe ọṅụṅụ? 5 Ọ̀ bụ na anyị enweghị ikike ịkpọrọ nwanna nwaanyị dị ka nwunye na-agagharị,+ ọbụna dị ka ndịozi ndị ọzọ na ụmụnne Onyenwe anyị+ na-eme, ha na Sifas?+ 6 Ka ọ̀ bụ naanị mụ na Banabas+ bụ ndị na-enweghị ikike ịkwụsị ịrụ ọrụ ego?+ 7 Olee onye jetụworo ozi dị ka onye agha site n’akpa nke ya onwe ya? Olee onye na-akọ ubi vaịn nke na-adịghị eri mkpụrụ ya?+ Ma ọ bụ, olee onye na-azụ anụ ụlọ nke na-adịghịkwa aṅụ mmiri ara nke si n’anụ ụlọ ahụ?+ 8 Àna m ekwu ihe ndị a dị ka ụkpụrụ mmadụ si dị?+ Ka ọ̀ bụ na Iwu+ ahụ ekwughị ihe ndị a? 9 N’ihi na n’iwu Mozis, e dere, sị: “Ekechila ọnụ ehi mgbe ọ na-azọcha mkpụrụ.”+ Ọ̀ bụ ehi ka Chineke nwere mmasị na ha? 10 Ka ọ̀ bụ naanị n’ihi anyị ka o ji na-ekwu ya? N’ezie, ọ bụ n’ihi anyị ka e ji dee ya,+ n’ihi na onye na-akọ ubi kwesịrị ịkọ ubi ma nwee olileanya, onye na-azọchakwa mkpụrụ kwesịrị ime otú ahụ ma nwee olileanya na ya ga-eri ya.+ 11 Ọ bụrụ na anyị akụworo unu ihe ime mmụọ,+ ọ̀ bụ oké ihe ma ọ bụrụ na anyị ga-aghọrọ ihe anụ ahụ́ n’aka unu dị ka mkpụrụ?+ 12 Ọ bụrụ na ndị ọzọ so nwee ikike a n’ebe unu nọ,+ ọ̀ bụ na anyị enweghị ya karị? Otú o sina dị, anyị ejighị ikike a mee ihe,+ kama anyị na-edi ihe niile, ka anyị wee ghara iweta ihe mgbochi ọ bụla n’ozi ọma+ banyere Kraịst. 13 Ọ̀ bụ na unu amaghị na ndị na-arụ ọrụ dị nsọ na-eri+ ihe ụlọ nsọ, ndị na-ejechikwa ozi anya+ n’ebe ịchụàjà nwere òkè dịịrị ha n’ebe ịchụàjà? 14 Otú a kwa ka Onyenwe anyị nyere iwu+ ka ndị na-ezisa ozi ọma na-adị ndụ site n’ozi ọma.+ 15 Ma ejibeghị m otu n’ime ndokwa ndị a mee ihe.+ N’ezie, edeghị m ihe ndị a ka o wee dị otú a n’ebe m nọ, n’ihi na ọ ga-akara m mma na m nwụrụ anwụ—ọ dịghị mmadụ ọ bụla ga-eme ka ihe m ji anya isi+ bụrụ ihe efu! 16 Ọ bụrụkwa na m na-ezisa ozi ọma,+ ọ bụghị ihe mere m ga-eji na-anya isi, n’ihi na ọ bụ mkpa nke dịịrị m.+ N’ezie, ahụhụ+ dịịrị m ma ọ bụrụ na ezisaghị m ozi ọma! 17 Ọ bụrụ na mụ ejiri ọchịchọ obi m+ mee ya, enwere m ụgwọ ọrụ;+ ma ọ bụrụ na mụ ejighị ọchịchọ obi m mee ya, n’agbanyeghị nke ahụ, m nwere ọrụ nlekọta ụlọ+ e nyefere m n’aka. 18 Gịnịzi bụ ụgwọ ọrụ m? Na mgbe m na-ezisa ozi ọma ka m wee kwusaa ozi ọma n’anaghị ihe ọ bụla,+ ka m wee ghara imebi ikike m nwere n’ozi ọma ahụ. 19 N’ihi na, ọ bụ ezie na ọ dịghị onye ọ bụla m ji ụgwọ, emewo m onwe m ohu+ nke mmadụ niile, ka m wee rite+ ọtụtụ mmadụ n’uru. 20 Ya mere, n’ebe ndị Juu nọ,+ adịrị m ka onye Juu, ka m wee rite ndị Juu n’uru; n’ebe ndị nọ n’okpuru iwu nọ, adịrị m ka onye nọ n’okpuru iwu,+ ọ bụ ezie na mụ onwe m anọghị n’okpuru iwu,+ ka m wee rite ndị nọ n’okpuru iwu n’uru. 21 N’ebe ndị na-enweghị iwu nọ,+ adịrị m ka onye na-enweghị iwu,+ ọ bụ ezie na abụghị m onye na-enweghị iwu n’ebe Chineke nọ, kama abụ m onye nọ n’okpuru iwu+ n’ebe Kraịst nọ,+ ka m wee rite ndị na-enweghị iwu n’uru. 22 N’ebe ndị na-adịghị ike nọ, aghọrọ m onye na-adịghị ike, ka m wee rite ndị na-adịghị ike n’uru.+ Aghọwo m ihe niile n’ebe ụdị mmadụ niile nọ,+ ka m wee si n’ụzọ ọ bụla zọpụta ụfọdụ ndị. 23 Ma ana m eme ihe niile n’ihi ozi ọma, ka m wee bụrụ onye na-ezisara ya+ ndị ọzọ. 24 Ọ̀ bụ na unu amaghị na ndị niile na-agba ọsọ n’ọsọ+ egwuregwu na-agba ọsọ, ma naanị otu onye na-enweta ihe a na-agbata n’ọsọ?+ Na-agbanụ ọsọ+ n’ụzọ ga-eme ka unu nweta ya.+ 25 Onye ọ bụla nke sokwa n’asọmpi na-enwe njide onwe onye+ n’ihe niile. Otú ọ dị, ha na-eme ya ka ha wee nweta okpu mmeri pụrụ ire ure,+ ma anyị na-eme ya ka anyị wee nweta nke na-apụghị ire ure.+ 26 Ya mere, otú m si agba ọsọ+ abụghị ihe a na-ejighị n’aka; otú m si eti ọkpọ bụ ka m wee ghara ịdị na-eti ikuku;+ 27 ma m na-etipụta ahụ́ m ọnyá,+ na-achị ya dị ka ohu, ka m wee ghara ịghọ onye a jụrụ ajụ+ n’ụzọ ọ bụla, mgbe m kwusasịịrị ndị ọzọ ozi ọma.